Shina diamondra & cbn fikosoham-bary mihodina kodiarana Carbide Rod Cutting sy mpanamboatra | Jinyunxiang
kodiarana fametahana diamondra & cbn ho an'ny Carbide Rod Cutting
Fampiharana ny kofehy famatoram-bary amin'ny kodiarana
Ny kodiaran-dranon'i resin dia ampiasaina ho an'ny fitaovana vita amin'ny karbida tungsten, vera automatique, PDC, PCD, PCBN, seramika, safira, fitaratra optika ary fitaovana magnetika.
Ny kodiarana famandrihana diamondra ao amin'ny resin dia misy hery manosika kely, tsy dia be ny fikosoham-bary, tsara ny fanamafisana ny tenany, ny fahombiazana ary ny faran'ny ambony. Ampiasaina indrindra amin'ny fikapohana, famaranana ny fametahana, ny fikosoham-bary semi-vita, ny fikosoham-bary ary ny poling.
Nampiasaina be amin'ny fanodinana ireo seramika seramika, semiconductor, fitaovana magnetika ary fitaovana metaly.
Ny tady vita amin'ny diamondra dia ampiasaina amin'ny fanapahana ny tsipika vita amin'ny vy sy ny vokatra matevina sy henjana.
Malaza amin'ny fanapahana mahomby sy mateza.
Previous: Fitaovana vita amin'ny hazo, diamondra ary tondra-kodiarana vita amin'ny fananganana hazo
Manaraka: Ny kodiarana vita amin'ny diamondra ho an'ny karbera TCT dia nahita ny fofona tarehy ho an'ny vollmer
Fitaovana fanamboarana kitay, diamondra ary CBN Grinding W ...
Ny kodiarana ho an'ny mpikapa hazo dia mety hiantoka ny fihenan-dàlana sy ny fanentanana ny fahatairana. Ny kodiarana vita amin'ny sinoa dia malaza amin'ny mpanjifa ao an-trano na any ivelany noho ny kalitao avo sy ny vidiny mifaninana.Grit miova arakaraka ny fampiharana. Fitaovana fametahana kodiarana diamondra fanoratana kodiarana ho an'ny metaly mitaingina karibonetra be dia be ny fanjifana kodiarana; Sady manenika tsara tsara, mitoto hafanana kely, mora plug, ...
Carbide boribory ny vatan-tsolika vita amin'ny vy manapaka, Familiana kodiarana ho an'ny fitaovana famonosana, Fomba fikosoham-bary diamondra ho an'ny tungeta karbàla, Maitso kodiarana ho an'ny famonosanana, Fanadiovana kodiarana diamondra / Cbn fanadiovana kodiarana ho an'ny fitaovana fanangonam-bolo, 5inch famatorana kofehy famatorana kodiarana ho an'ny famonosana fitaovana famonosana baoritra,